Wacaal Darey ah: Xubno katrisan Argagixisada Al-shabaab oo Baran lagu qabtay – Radio Daljir
Wacaal Darey ah: Xubno katrisan Argagixisada Al-shabaab oo Baran lagu qabtay
Agoosto 12, 2019 11:02 b 0
Ciidamada amniga Puntland ee gobolka Sanaag gaar ahaan demaga Baran ayaa gacanta ku dhigay saddax ruux oo ku eedeesan in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-shabaab, halka mid kale oo afaraadna ay ciidamadu toogteen.
ragan ayaa ka soo ambabaxeen magaalada Ceerigaabo waxayna ay ka yimaadeen dhanka koonfurta Soomaaliya.
lama oga sida ay kuyimaadeen xubnahan magaalada Ceerigaabo, balse laamaha amniga ayaa sheegay in ay ka war hayeen socdaalkooda waxayna ku sii jeedeen Buuralayda Galgala oo ay Al-shabaab ku dhuumaalaysanayaan.
Halkan ka dhegayso wariyaha Daljir Maxamuud Cabdi Ibraahin oo faah faahinay.
Wacaal Darey ah: Qarax ka dhacay Bosaaso